Resaky ny mpitsimpona akotry : Ankadilalana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : Ankadilalana
Tsy ho ela dia hiverina ho mendrika indray ny anaran’iny lalana mampitohy an’i Mahamasina sy Tsimbazaza iny. Tsy mbola azo lazaina hoe hadivory akory fa rehefa avy ny orana ka tondra-drano ny arabe dia tsy fantatra intsony ny lavadavaka sy ny tena lalana. Antoandro be izao aza dia efa mitohana tsikelikely ny fifamoivoizana, tsy maintsy mifandefitra, indraidray ny avy any ambony no tsy maintsy miala ny lavaka tandrify ny faritra tokony izorany, lavidavitra kely eo dia anjaran’ireo miakatra no mihato.
Izany ve moa atao ahagaga intsony, manerana ny Renivohitra dia maro ny arabe mitaiza fery toy izany. Rahampitso lava io. Ny fanamboarana ve no tsy manara-penitra sa ny setrasetran’ny zava-boary no tafahoatra ka tsy zakan’ny tsenan’ny fitantanana intsony?
Misy ihany anefa trangan-javatra azo anankinana fanantenana. Tamin’ny herintaona moa dia efa nampitandrina ampahibemaso ny Filoham-pirenena fa hanaraka akaiky ny fanatontosana ny asa ary tsy hanaiky intsony ny fanaovana halasafahy. Kanjo nisy fahasimbana iny lalana teteziny isan’andro iny avy eny Ankadimbahoaka mankany amin’ny By-pass. Tsy nahafampo ny fanamboarana, vetivety foana dia ireny fa nipoitra ny lavadavaka.
Asa izay fanenon’ny fibedibedesana tany an-dapa tany, fa tamin’ny herinandro lasa iny dia fanatanterahana asa vaventy mahery vaika no tazana tamin’iny tapa-dalana iny, orinasa anisan’ny lehibe indrindra eto an-toerana no niandraikitra izany. Misosa ny fandehanana amin’iny arabe iny izao.
Mandeha ny fisainana teraka ny faniriana, eran’izao faritra rehetra izao miainga ny nofinofy: raha mba aty aminay re no mandalo ny Prezidà angamba mba ho voasoroka ny fahasahiranana ateraky ny làlana. Aoka kely, azafady. Naman’ny nofinofy izany. Raha mba fantatra ny saran’ny asa fanamboarana natao tamin’iny lalana iny dia hijanona teo ny nofy. Tsy misy fiangarana anefa ny fanaovana izany ezaka izany, maraina sy hariva dia iny ny lalana omban’ny Filohampirenena, izy indray ve no ampandeferina? Tany alohany tany anie nisy fisehoana fanjakazakana manoatra lavitra. Ity tsy olon-tokana no misitraka fa izay rehetra tia hampiadan-tena vetivety amin’ny fitetezana lalana mba manara-penitra.